🥇 ▷ Reedyow Samsung S6 ah: sidee loo dhaqaajiyaa? ✅
Reedyow Samsung S6 ah: sidee loo dhaqaajiyaa?
Raadiyaha wuxuu ahaa hab dhaqameed aad u ballaaran oo waxtar badan oo isgaadhsiin oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan aalado yaryar oo oggolaanaya is-qoritaanka, qaar ayaa caadiyan raaxo-darro u leh isticmaaleyaasha, kuwaas oo ku xaddidan qaadista kaliya aaladaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo maalin walba. Sidaa darteed, iyada oo loo marayo tillaabooyin taxane ah ayay suurtagal tahay in lagu hawl galiyo shaqadan mobilada si dhakhso ah, ficil ah iyo hab fudud.
Reedyow Samsung S6
Kuwa doonaya inay dhagaystaan ​​raadiyaha taleefanka Samsung S6 ee taleefankooda casriga ah, kaliya waa inay rakibo codsi u oggolaanaya inuu qabsado calaamadaha astaamaha isku dhafan ee leh aaladahaas, nasiib wanaagse, waxaa jira ikhtiyaar aad u kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala inay ku raaxeystaan ​​sifooyinka ay soo bandhigtay habkan isgaarsiinta caadiga ah.
Mid ka mid ah codsiyada la heli karo waa TuneIn Radio. Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan waa in ay u oggolaato dadka isticmaala inay ku baraarugaan saldhigyada qaran iyo kuwa caalamiga ah, taas oo ka dhigaysa mid aad wax ku ool ah oo leh xulashooyin aad u kala duwan.
Meel dhexdhexaad ah oo la jaan qaada dhadhanka
Sidoo kale, Jango Radio ayaa sidoo kale leh astaamo aad u faa’iido badan, maadaama ay leedahay mashiin raadinta sidaa darteed adeegsadayaasha, kaliya iyagoo galaya magaca farshaxanka, waxay heli karaan boqolaal saldhigyo ah oo baahinaya heesahooda.
Idaacadda Samsung S6 waxay runtii noqon kartaa khibrad cajiib ah oo ku saabsan rakibidda codsiyada noocan oo kale ah. Xaqiiqdii, waxaa jira kuwa kale oo aan bixin oo keliya kala duwanaanta, laakiin iyaga la jira, adeegsadayaashu waxay abuuri karaan kanaalyo raadiyo u gaar ah, sida Stitcher SmartRadio, oo ku habboon la-qabsiga laxannada muusikada iyo macluumaadka kale ee xiisaha leh.
Waxyaabo kale oo kala duwan
Sidoo kale, waa suurtagal in la ogaado waxa muusikada ka socda waddamada kale, waxaa mahad leh barnaamijka Raadiyo Raadiyaha FM-ka, kaasoo u kala qeybsan in ka badan 10,000 oo xarumood waddanka. Ugu dambeyntiina, dhageysiga raadiyaha ee Samsung S6 waa mid dhab ah, waana waayo-aragnimo u soo jiidaneysa xiisaha.